Dry Skin (အသားခြောက်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Dry Skin (အသားခြောက်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Dry Skin (အသားခြောက်ခြင်း)
ရေးသားသူ Dr. Sandar Lin ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar
Dry Skin (အသားခြောက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
အရေပြားယားယံခြင်း၊အက်ကွဲခြင်း၊အဖတ်ဖတ်များကွာကျခြင်းစသည်တို့သည်အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်း၏လက္ခဏာများ ပင်ဖြစ်သည်။အထူးသဖြင့်ခြေသလုံး၊လက်မောင်းနှင့်ဝမ်းဗိုက်နေရာတို့တွင်ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။အသားခြောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန် အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်သင့်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်သည်။
Dry Skin (အသားခြောက်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အရေပြားဆွဲဆန့်ထားသလိုတင်းတင်းကြီးခံစားရခြင်း (အထူးသဖြင့် ရေချိုးခြင်း ရေကူးခြင်းတို့ပြုလုပ်ပြီးနောက်)
ထိုလက္ခဏာများသည်သေချာမထိန်းသိမ်းပါကအရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းထိဖြစ်သွားနိုင်သည်။အလွန်အမင်းအသားခြောက်ခြင်းသည် အက်ကွဲကြောင်းများပေါ်လာပြီးသွေးထွက်နိုင်ပြီး ပိုးမွှားများဝင်ရောက်နိုင်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါလက္ခဏာတစ်ခုခုရှိခဲ့သည်ဖြစ်စေ သို့ အသားခြောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး တစ်ခုခုခံစားရလျှင် နီးစပ်ရာဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်သည်။
Dry Skin (အသားခြောက်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ရာသီဥတု- ဆောင်းရာသီကဲ့သို့အအေးဓာတ်လွန်ကဲခြင်းနှင့်အစိုဓာတ်ကျဆင်းခြင်းတို့သည်အသားခြောက်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။အပူပိုင်းဒေသများ၏အပူ လွန်ကဲခြင်းကလည်း အသားခြောက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အပူလွန်ကဲခြင်း- အပူ ဓာတ်ရရှိအောင်သုံးလေ့ရှိသောအပူပေးစနစ်များ၊ထင်းမီးဖို၊မီးဖိုတို့သည် စိုထိုင်းမှုကို လျော့ကျစေခြင်းကြောင့် အရေပြားကိုခြောက်သွေ့စေသည်။
ရေနွေးဖြင့်အချိန်ကြာရေချိုးခြင်း၊ ကလိုရင်းခတ်ထားသောရေကူးကန်များတွင်ရေကူးခြင်းတို့သည်လည်း အရေပြးကိုခြောက်သွေ့စေသည်။
ဆပ်ပြာနှင့်အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာမှုန့် -အချို့ဆပ်ပြာနှင့်ဆပ်ပြာမှုန့်များတွင်ပါဝင်သောပစ္စည်းအချို့က အရေပြား၏အစို ဓာတ်ကိုပျက်စီးစေသည်။ချွေးနံ့နှင့်ပိုးမွှားကင်းစင်စေသောဆပ်ပြာများသည် အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။ခေါင်းလျှော်ရည်အချို့မှာလည်းထိုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။
နေရောင်ခြည်နှင့်ထိတွေ့ခြင်း -နေရောင်ခြည်တွင်ပါသောခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည်အရေပြားအတွင်းပိုင်းထိ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ထိုအခါ အရေပြားပျက်စီးလာပြီး အရေးအကြောင်းများ၊အရေပြားတွဲကျခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
အချို့ရောဂါ eczemaနှင့် psoriasis ရောဂါရှိသူများသည်လည်း အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းကိုခံစားရနိုင်သည်။
Dry Skin (အသားခြောက်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Dry Skin (အသားခြောက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်ဆရာဝန်မှကျန်းမာရေးရာဇဝင်နှင့် စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ပါလိမ့မည်။ဥပမာ ဘယ်အချိန်အသားခြောက်သလဲ၊ဘယ်လိုအရာတွေကအသားခြောက်ခြင်းကိုပိုဆိုးစေသလဲ၊သင့်ရေချိုးခြင်းအလေ့အထများ၊အစားအသောက်၊အရေပြားထိန်းသိမ်းမှုများပါဝင်သည်။ထိုမှတဆင့်ရောဂါတစ်ခုခုနှင့်ဆက်နွှယ်သည်ဟုသံသယရှိပါကသွေးဖောက်စစ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။
Dry Skin (အသားခြောက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အများစုအသားခြောက်သူများသည် ရောဂါ၁ခုခုနှင့်မဆက်နွှယ်ပါက ကုသရလွယ်ကူသည်။အစို ဓာတ်ထိန်းပစ္စည်းများလိမ်းခြင်း၊ရေအချိန်ကြာချိုးခြင်းမှရှောင်ခြင်းတို့လိုက်နာဖို့လိုအပ်သည်။အသားရေခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းပြီး အဖတ်ဖတ်များကွာနေပါက ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ပါ lactic acid နှင့် urea ပါသောခရမ်လိမ်းရန်ညွှန်ကြားနိုင်သည်။
ဒီထက်ပိုရောင်ရမ်းပြီးယားယံခြင်းများဖြစ်လာပါကhydroxyurea ပါသောခရမ်များလိမ်းရတတ်ပြီး အက်ကွဲပြီးအနာဖြစ်လာပါ အနာဆေးထည့်ရန်လိုအပ်သည်။
ရေချိုးပြီးသည်နှင့် အစို ဓာတ်ခရမ်လိမ်းခြင်း
ယခုဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များမှာ ဆေးပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ၏ အကြံပေးချက်များနေရာတွင် အစားထိုးရန် မသင့်တော်ပါ။ ဆက်လက်သိရှိလိုသောအချက်အလက်များအတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲံ အမြဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
http://www.healthline.com/symptom/dry-skin. Accessed September 4th, 2016.
Fighting Back Against Dry Skin.
http://www.webmd.com/beauty/dry-skin-13/dry-skin-causes. Accessed September 4th, 2016.
7 Tips to Soothe Your Dry, Itchy Skin.
http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/dry-skin#1. Accessed September 4th, 2016.
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-skin/basics/lifestyle-home-remedies/con-20030009. Accessed September 4th, 2016.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖျောဝါရီ 2, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖျောဝါရီ 15, 2018
ကိုယ့်လူတို့လည်း သတိထားသင့်တဲ့ ရင်သားကင်ဆာအကြောင်း
မိဘများအတွက်လမ်းညွှန်, ကလေးကျန်းမာရေး, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း
ကလေးတွေမှာ ဖြစ်တဲ့ တီင်္ဘီရောဂါ
ပင့်ကူကိုက်ခံရတဲ့ ဒဏ်ရာအတွက် အိမ်တွင်းကုထုံးနည်းများ
ကျောက်ကပ်မှာပြဿနာရှိနေပြီလို့ ပြနေတဲ့ လက္ခဏာ (၁၀) ခု
ပုရိသများနှင့် သုက်ထွက်ရန်ကြာလွန်းတဲ့ ပြဿနာ
လူအများရှေ့မှာ စကားထွက်ပြောဖို့ ကြောက်တဲ့ ပြဿနာ